आत्महत्या समस्याको हल हो र ! – Chitwan Post
आत्महत्या समस्याको हल हो र !
आत्महत्याको परिणाम के हुन्छ ?
नेपालमा हाल आएर सुसाइट नोट लेखेर आत्महत्या गर्ने घटना फिल्मी शैलीको सोचजस्तो लाग्छ । विद्यार्थी बालक, सिंहदरबारभित्रका नायब सुब्बा बच्चुराम केसी, मालपोत कलंकीका कर्मचारी हरि आचार्य, गत असार ३ मा समता अस्पतालमा विमला तामाङको घटनादेखि पत्रकार शालिकराम पुडासैनीलगायतका थुप्रै घटना समान प्रकृतिका देखिन्छन् । २०७४ भदौ १ गतेदेखि लागू भइरहेको मुलुकी फौजदारी अपराध संहितापछि नेपालमा १३१ जनालाई आत्महत्या दुरूत्साहन गरेको अभियोगमा प्रहरीद्वारा नियन्त्रणमा लिइएको पाइएको छ । आत्महत्या गर्न दुरूत्साहन गरेको प्रमाणित भएमा संहिताको दफा १८५ को उपदफा २ मा उल्लेख भएअनुसार ‘आत्महत्या गर्न दुरुत्साहन दिन नहुने कसुर गर्ने व्यक्तिलाई ५ वर्षसम्मको कैद र २५ हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गरिने छ’ भनिएको छ । आत्महत्याजस्ता घटनाले मर्ने मरिसक्छ, बाँच्नेले दुःख पाउनुपर्छ । पत्रकार रवि लामिछानेको नाम गाँसिएको पुडासैनी मृत्यु प्रकरणमा सडकमा जनता उत्रनु देखिएको र पृथक उदाहरण हो । विडम्बना, मर्ने व्यक्ति प्राथमिक स्रोत हो तर ऊ मरिसक्छ । सुसाइट नोटमा मात्रै सत्यता अडिन्छ भन्नलाई पनि अप्ठेरो हुन्छ । मर्नेले निर्दोष मान्छेको नाम किटानी गरिदिए कसरी प्रमाणका आधारमा दोषी ठहराउने, चुनौतीको विषय हो । एकातिर आत्महत्या गराइएको हुन्छ या आफैँ गरिएको भन्ने विषयले अनुसन्धाताका लागि समस्या उब्जाइदिन्छ । घटना संवेदनशील हो तर स्वयम् पीडित नै मरिसकेको हुन्छ ।
मान्छेलाई जीवनसँग असन्तुष्टि किन हुन्छ ? किर्केगार्ड भन्छन् : ‘प्रत्येक व्यक्ति कुनै वस्तु घटनालाई स्वतन्त्र रूपले रोज्ने, छान्ने र निर्णय गर्ने गर्दछ र आफ्ना निर्णयका परिणामले ऊ दुःख, सुख भोग्न अग्रसर हुने गर्दछ । यसकारण आफ्नो निर्णयको उत्तरदायित्व बहन गर्नु नै व्यक्तिको अस्तित्वको चिन्ह हो ।’ जब मान्छेले जीवनको अस्तित्व नै बिर्सन्छ तब ऊ विसङ्गतिको चरम् शून्यवादमा विलय हुन्छ । मान्छेले जीवनको अमूल्य रहस्यलाई खोतल्ने हो भने मानिसमा बाँचुन्जेल सबै कुराको सम्भव छ । मान्छेले सोच्न सक्छ, विचार गर्न सक्छ, गल्ती हुन्छ नै तर सुधार गरेर अझ बढी उन्नति गर्न सक्छ तथापि मृत्यु भएपछि बिउबिनाको खेत बन्छ । शरीर खरानी हुन्छ, सबै सम्भाव्यता खत्तम । जीवन त अनमोल छ, जसलाई संसारको दौलतले किन्न सकिन्न रहेछ । धन, सम्पत्तिको चाहना, आवश्यकताको लामो सूची सबै मानिसले यो आधुनिक संसारमा स्वार्थका लागि जन्माउँदै लगेको एउटा प्रपञ्च हो । किनकि पैसा र पैसा छाप्ने मेसिन पनि मानिसकै बुद्धि हो । अतः जीवन पैसा होइन तर जीवन पैसालाई पनि तुच्छ बनाउने अमूल्य निधि हो ।
उत्तरआधुनिक अवस्थामा यान्त्रिक जीवन भोगिरहने इज्जतदार कलाकार, सामाजिक सञ्जाल र आम दुनियामा छवि कमाएकाहरू नै बढी असन्तुष्ट देखिन्छन् । विसङ्गत सोच नभई मानिस आत्महत्याको स्थितिमा पुग्दैन । आशाको कुनै पनि आधार नदेखेरै मानिस अमूल्य जीवनलाई फाल्नतिर लहसिन्छ तर चाहेर पनि जीवन पाइँदैन भन्ने कुरालाई बुझ्ने हो भने यस्ता घटना घट्दै घट्दैनन् । मूलतः आध्यात्मिक प्रकृतिका मान्छेले मात्र आत्मज्ञान र जीवनको रहस्यलाई भित्रबाटै बोध गरेको बुझिन्छ । तिनले त आत्महत्या होइन जीवनको सार्थकता र सफलतालाई मात्र सोचेको देखिन्छ ।
जीवन कसलाई प्रिय लाग्दैन र ? आज जे जति आत्महत्याका घटना नेपालमा भइरहेका छन् ती गरिबी, बाध्यता, दैनिक जीवनका जटिलता, क्रोध, रोगदेखि कतिपय अवस्थामा वंशाणुगत प्रभाव पनि एउटा कारण बनेको अनुसन्धानले देखाएको छ । असह्य प्रताडना वा दबाब भोगेका, कम सुत्नेदेखि डिप्रेसनले मानिसलाई आत्महत्या गराएको देखिन्छ । यस्ता घटनालाई फिल्मी कथाले पनि केही प्रभाव पारेको हुन्छ तर पछिल्लो समयमा नेपाली नाटकहरूमा यस्ता प्रकृतिका कथावस्तु पहिलाको जसरी भेटिँदैनन् । यो राम्रो कुरा हो । भ्रष्टाचारको काण्डमा मुछिएका सरकारी कर्मचारीहरूको आत्महत्यालाई केलाउने हो भने जागिर पाउनुले मात्रै पनि यस्ता घटनालाई कम गर्ने रहेनछन् बरु सचेतता र सत्यताले प्रभाव पार्ने रहेछ । तर, निर्दोषले न्यायको तराजु असन्तुलित भएको देखेर पनि सायद निस्सारता बोध गर्दा हुन् । यद्यपि जीवनकै उत्सर्ग गर्नु मान्छेको बौद्धिकताभन्दा तल्लो स्तरको सोच हो किनकि जीवन हार्नका लागि पाइएको होइन । तर, न्यायको आँखामा पट्टि बाँधिनु हुन्न मात्र न्यायाधीशको आँखामा बाँधियोस् । न्याय मन्दिर कुनै पनि हदमा राजनीतिगत अखडा बन्यो भने सामाजिक सुरक्षा र व्यक्तिगत स्वतन्त्रताका सवालमा जनताले राज्यसँग भरोसा गर्न नसकेर निराशा छाएको हुनसक्छ । न्यायालय मात्रै यस्तो स्थान हो जहाँ अन्त कतै नपाइएको सत्यताको आशा बचिरहन्छ । यो जनताको भरोसाको धरोहर हो र भइरहनुपर्छ पनि ।
उत्तरआधुनिक अवस्थामा यान्त्रिक जीवन भोगिरहने इज्जतदार कलाकार, सामाजिक सञ्जाल र आम दुनियामा छवि कमाएकाहरू नै बढी असन्तुष्ट देखिन्छन् । विसङ्गत सोच नभई मानिस आत्महत्याको स्थितिमा पुग्दैन । आशाको कुनै पनि आधार नदेखेरै मानिस अमूल्य जीवनलाई फाल्नतिर लहसिन्छ तर चाहेर पनि जीवन पाइँदैन भन्ने कुरालाई बुझ्ने हो भने यस्ता घटना घट्दै घट्दैनन् । मूलतः आध्यात्मिक प्रकृतिका मान्छेले मात्र आत्मज्ञान र जीवनको रहस्यलाई भित्रबाटै बोध गरेको बुझिन्छ । तिनले त आत्महत्या होइन जीवनको सार्थकता र सफलतालाई मात्र सोचेको देखिन्छ । मान्छे विभिन्न व्यथाहरूले घेरिइरहँदा एउटा व्यथा मृत्यु हो जसबाट ऊ विराट शून्यमा हराइरहन्छ । मान्छेले निस्सारतामा मृत्युको विकल्पलाई त चुन्छ तर मृत्युकै मात्र अन्तिम विकल्प खोज्ने हुनाले आत्महत्या गर्ने मान्छेलाई कायर हुन्छ । अब मानवीय संवेदनाभित्र पसेर हेर्ने हो भने पनि मानिस आजको संसारमा लगभग भोकै रहनुपर्दैन न्याय माग्न जाने निकायहरू बनिसकेका छन् ।
हामी चाहेर जन्मेका हुँदैनौँ
जीवन एकपटक पाइन्छ । चाहेर पनि अर्को जीवन पाइने अपेक्षा पूरा हुने कुनै यकिन छैन । तसर्थ जीवनको अर्थ मानिसका लागि जिउने अवसर हो । दुःखलाई यो संसारले बनाएको हो । कसैले जन्मदै सुख र दुःख बोकेर आएको हुँदैन । जाँ पाल सात्र्र भन्छन् – संसारका वस्तु मूल्यहीन हुन्छन् तर तिनलाई मूल्य प्रदान गर्ने काम मानिसले गर्छ । वास्तवमा मेरो जीवनका लागि म नै जिम्मेवार हुन्छु । कार्यको बोझ संसारका लागि होइन असल कार्यको चयनका लागि गरिने सङ्घर्ष मात्र हो । किनकि संसार हुनलाई एउटा क्षण मात्र हो । तर संसारमा हामी नचाहेरै जन्मन्छौँ र नचाहँदैमा मर्छौँ । हामीले संसारका धेरै कुरालाई जान्न पनि चाहन्छौँ त्यो मानिसको प्रकृति हो तर एउटा विषयलाई पनि पूर्णताका साथ जान्न सक्दैनौँ । त्यसैले हामी यो संसारमा अज्ञानता नै अज्ञानतामा बाँच्न विवस छौँ । यो संसारको रित नै हो । यद्यपि हामीले केही जानेनौँ भनेर आत्महत्या गरे पनि केही जान्दैनौँ । आत्महत्या समस्याको हल होइन कायरपना मात्र हो ।
जब मान्छेले जीवनको अस्तित्व नै बिर्सन्छ तब ऊ विसङ्गतिको चरम् शून्यवादमा विलय हुन्छ । मान्छेले जीवनको अमूल्य रहस्यलाई खोतल्ने हो भने मानिसमा बाँचुन्जेल सबै कुराको सम्भव छ । मान्छेले सोच्न सक्छ, विचार गर्न सक्छ, गल्ती हुन्छ नै तर सुधार गरेर अझ बढी उन्नति गर्न सक्छ तथापि मृत्यु भएपछि बिउबिनाको खेत बन्छ । शरीर खरानी हुन्छ, सबै सम्भाव्यता खत्तम । जीवन त अनमोल छ, जसलाई संसारको दौलतले किन्न सकिन्न रहेछ । धन, सम्पत्तिको चाहना, आवश्यकताको लामो सूची सबै मानिसले यो आधुनिक संसारमा स्वार्थका लागि जन्माउँदै लगेको एउटा प्रपञ्च हो ।
मानिस सार्वभौम बन्न नसके पनि उसले आपूmलाई विशिष्ट मानव बनाउन सक्छ । जन्मसँगै मृत्यु लिएर आएकाले मानिसको निर्माणको विषयमा सजगता, सचेतताले प्रभाव पार्दैन । मानिस स्वतः पहिल्यै निर्मित भएको सचेत र भाग्यमानी प्राणी हो । आपूm स्वयम्को इच्छाविना हरेक प्राणी यो संसारमा जन्मन्छ । न त बाबाआमाले मलाई नै जन्मदिने भनेर चाहेका हुन्छन् । न मैले म जन्मन चाहन्छु भनेर जन्मेको हुन्छु । जीवनमा जन्म भइसक्यो, जीवन चलिरहेको छ तर मृत्युमात्र अबको बाँकी अंश हो । यद्यपि मृत्यु अवश्यंभावी भएकाले आफ्नो वैयक्तिक जीवनलाई सार्थक, विशिष्ट र स्थापित तुल्याउनुपर्छ । यो प्राणीका लागि अवसर हो । अस्तित्ववादी मान्यतालाई हेर्ने हो भने हरेक मानिसले आफ्नो जीवनको अर्थ र प्रयोजनका बारेमा स्वयम् निर्णय गर्नुपर्छ र उत्तरदायित्व बोध गर्नुपर्छ तर मृत्युको भयले उसलाई त्रासमय बनाइदिन्छ तसर्थ स्वतन्त्रताका लागि बाँच्न सिक्नुपर्छ । हुन त नित्से नामक दार्शनिकले ‘ईश्वरको मृत्यु भयो’ भन्दिएर निराशालाई बढाइदिए तर मानिसले आफूमा भएको ईश्वरत्वलाई खोज्नु नै उसको महानता हो । यो जीवन रहेसम्ममा मात्र सम्भावना रहिरहन्छ । मानिसले आफ्नो अस्तित्वलाई विसङ्गतिकै बिचबाट खोज्छ । शून्यताले मान्छेको अमूल्य सिर्जनशीलतालाई मारिदिन्छ तसर्थ यो संसारको निस्सारता, निरर्थकता र विसङ्गतिका बीचबाट मानिसले आफूलाई विशिष्ट तुल्याउन सक्छ ।
नेपालमा किन आत्महत्या बढिरहेको छ ?
हाल आएर आत्महत्याबाट मुलुकमा एक हिसाबले निस्सारता बढेको आभास हुन्छ । सन् २०१७ मा नै विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले गरेको १८३ वटा देशको तथ्याङ्कमा नेपाल १२७ औँ स्थानमा परेको थियो । पहिलो स्थानमा पर्ने श्रीलङ्काको आत्महत्याको मृत्युदर ३४.६४ प्रतिशत भएकोमा नेपालको ७.०२ प्रतिशत रहेको छ । श्रीलङ्का लगायतका देशमा गरिबीका कारणले आत्महत्या गर्ने गरेको तथ्यलाई हेर्ने हो भने नेपालको परिवेशमा नाम, काम र दामको समस्याले प्रभाव पारेको देखिन्छ । यो प्रभावले छिमेकी देश भारत पनि अछूतो देखिन्न । इज्जत भएकैहरू र मध्यम वर्गीय समुदायका व्यक्ति पनि आत्महत्याजस्तो विशाल अग्नि ज्वालामा किन होमिन्छन् भन्ने प्रश्नको उत्तर जीवनप्रतिको निराशा नै हो ।
मुलुकी अपराध संहिता २०७४ लागु भएपश्चात् क्रमशः एकदेखि सातैवटा प्रदेशहरूमा १८, १२, १६, ८, २५, ५, ३६ वटा साथै उपत्यकामा मात्र ११ वटा उजुरी दर्ता भएको बताइएको छ । हालै प्रहरीले प्रस्तुत गरेको तथ्याङ्कलाई हेर्दा नेपालमा पछिल्ला तीन वर्षको अन्तरालमा १६ हजार १९५ जनाले आत्महत्या गरे । खोलामा हाम्फालेर, धारिलो हतियार प्रयोग गर्ने लगायतका विभिन्न प्रकृतिमध्ये झुन्डिएर आत्महत्या गर्नेमध्ये नेपालमा १२ हजारले त झुन्डिएरै आत्महत्या गरेका छन् । आ.व. २०७३/०७४ मा मात्र नेपालमा पाँच हजार एक सय २४ जनाले आत्महत्या गरेको तथ्याङ्क भेटिन्छ । नेपाली समाजका बाध्यतालाई हेर्ने हो भने गरिबी र बेरोजगारिताले झापड हानेकै हो तर असफल प्रेम सम्बन्धले मूलतः युवा वर्गलाई यसको सिकार बनाएको भन्न सकिन्छ । यसका अतिरिक्त शैक्षिक क्षेत्रमा भएका असफलता, ऋण, स्वास्थ्योपचारमा आइपरेका बाध्यतादेखि असन्तुलित पारिवारिक अवस्थाले आत्महत्यालाई प्रोत्साहन गरिरहेको देखिन्छ । फेरि यसो भनिरहँदा विकसित मुलुकमा आत्मघाती हमला हुनु गरिबीपना भन्दा बढी नकारात्मक विचार र प्रतिस्पर्धाको प्रतिशोधी भावनाले उक्साएको मूर्खता प्रदर्शनी मात्र हो । तिनमा अभावले प्रहार गरेकै होइन, मात्र यान्त्रिक उग्रवादको प्रभाव हो ।
मूलतः भारत र नेपालको आत्महत्याका प्रकृति मिल्दाजुल्दा देखिन्छन् । कृषकले खडेरी परेर खेती गर्न नसक्दा पनि आत्महत्या गरेका घटना, ऋण तिर्न नसकेर, अझ सामूहिक आत्महत्या, समाजमा लाञ्छित वा अपमानित भएर यस्ता घटना घटिरहेका छन् । यस विषयमा वास्तवमा जनताको चाहना र खुसीको क्षणलाई विकास गर्न रोजगार र अवसर प्रदान गर्न नसकिनु आजकै अवस्थामा मूल कारक हो । विदेशमा काम गरिरहेका नेपालीका वेदनादेखि स्वदेशमै अपेक्षा र आवश्यकता पूर्ति हुन नसकेर आत्महत्यामा होमिएकाहरूलाई हेर्ने हो भने राज्यले रोजगारको उचित व्यवस्था गर्न नसक्नु मूल समस्या बनेको देखिन्छ । तर, यसरी हारेर, कायर भएर, कुनै आधार नदेखेर आत्महत्या गर्नु भनेको आफ्नो विशाल सुन्दर संसारलाई गुमाउनु हो ।
आत्महत्या गर्नु कुनै समस्याको समाधान भइदिएको भए बाँचेकाले पनि तड्पिनु पर्ने हुन्नथ्यो होला नि ? अतः सिर्जनात्मक कर्ममा संलग्न हुने असल सोचका साथ हिम्मत गर्ने हो भने सडकमा बसेर पनि पेट पाल्न सकिन्छ । तर, अब देशले कोल्टो फेर्दै छ, विभिन्न आधारलाई तय गरिरहेको देखिन्छ । यहाँसम्म दुखित बन्नु पर्दैन, हामी सबै हातेमालो गरेर लाग्नुपर्छ । बरु समाजमा जनचेतनाको विकास गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । सबै संघ, संस्था, निकायले एकसाथ सचेतना र आशासहितका सम्भाव्यतालाई समाज सामु पस्कन सकिन्छ ।